Saina sy Fo - Fihetseham-po amin'ny fianarana sy fitsarana (Tsanganana 467) - Raby Michael Avraham
Saina sy Fo - Fihetseham-po amin'ny fianarana sy fitsarana tsy ara-dalàna (Tsanganana 467)
45 hevitra	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
Andro vitsy lasa izay dia tonga tao amin'ny pejy Daf La Bibamot izy ireo, izay nahitana ilay resaka mahafinaritra hoe "Nidona taminy ny trano ary niseho ny zanak'anabaviny ary tsy fantatra hoe iza tamin'izy ireo no maty voalohany, nanetry ny akanjony izy ary tsy nitomany."
Hayuta Deutsch dia nandefa ahy ity sombiny ity miaraka amin'ny fanehoan-kevitra manaraka:
Lehibe izany! Ohatra iray lehibe (iray amin'ireo maro fa tsara indrindra indrindra) ny fihaonan'ny tontolon'ny halakhic ara-dalàna 'laboratoara' sy ny zava-misy manaitra (telenovela tsara tarehy sy mandatsa-dranomaso).
Nandritra ny fifanakalozan-kevitra teo aminay taorian'izay dia nihevitra aho fa mety ny hanokana tsanganana amin'ireo zavatra ireo.
Ny lafiny ara-pihetseham-po sy maha-olombelona amin'ny olana halakhic
Rehefa mieritreritra an'io toe-javatra io ianao ary miditra amin'izany bebe kokoa amin'ny sehatra ara-tsaina, dia loza tsy dia tsotra loatra no nihatra tamin'ity fianakaviana mampalahelo ity (samy manana ny fombany, tsarovy). Saingy izaho mpianatra tsotra dia tsy nahatsikaritra izany mihitsy. Resaka halakhic mahavariana sy saro-takarina ity, ary amiko tsy misy olona mijaly eto, izany hoe ny olombelona. Ireo rehetra ireo dia tarehimarika na aloka eo amin'ny sehatra halakhic-intellectuel. Tanjona amin'ny toetra amam-panahy amin'ny fanofanana ny saina, izay amin'ny ankapobeny dia natao hanehoana hevitra halakhic. Amin'ny fandalinantsika dia miatrika mpamono olona, ​​mpangalatra, mpivaro-kena, mpandainga, loza ary loza isan-karazany isika ary miresaka momba izany rehetra izany amin'ny fitoniana mahafinaritra. Noho izany, ny ankizy ao Hyderabad dia afaka mianatra olana mavesa-danja, na dia taorian'ny fihaonana toy izany aza tamin'ny toe-javatra rehetra, ny ray aman-dreniny dia ho voatarika taorian'ny fanajana ny fiadanan-tsaina ary izy ireo mihitsy no navela tamin'ny fiteny miraviravy tanana noho ny fahatairana. Mandalo am-pilaminana eto amintsika anefa ity matso manontolo ity ary tsy misy hodi-maso.
Tsy hitako izay fihantsiana amin'ireo tenin'ny bibiny ireo. Mifanohitra amin'izany, mankasitraka ny dika mitovy eo amin'ny sehatry ny fifanakalozan-kevitra (olombelona sy halakhic) izy ireo, saingy na izany aza dia henoko tany ambadika tany ny fanakianana marobe momba ny hatsiakan'ny fifanakalozan-dresaka, izany hoe ny tsy firaharahana ny refin'olombelona sarotra amin'ity raharaha ity. Ny Gemara dia manoritsoritra ity tranga ity ho toy ny hena latsaka tao anaty saosy ronono, ary nanohy niresaka momba ny lalàna mihatra amin'ny tranga toy izany. Tsy raharahainy tanteraka ny loza mahatsiravina nitranga teto. Ity fianakaviana nidonam-pahoriana ity dia tavela tsy misy ny vadiny (iray amin'ireo olana tokoa) sy ilay rahalahy izay samy avy amin'ny fianakaviana iray. Iza no mijanona eo mba hanohana ny kamboty? (Oh, tena tsy misy, raha tsy izany dia tsy nisy rakikira teto.) Fo Iza no tsy hitomany ary inona no tsy hilatsahan'ny maso raha mandre izany rehetra izany?! Rehefa dinihina tokoa, eo amin'ny sofin'ny sofin'ny fanahintsika.
Heveriko fa ny feon-kira henoko tamin'ny tenin'ny bibiny, dia mifototra amin'ny zavatra niainako isan'andro tao amin'ny beit midrash ho an'ireo mpianatry ny dokotera ao amin'ny Bar Ilan (sy amin'ny sehatra vehivavy hafa). Saika isaky ny tonga amin'ny olana toy izany isika dia misy references mihozongozona avy amin'ny maha-olombelona sy ny lanjany ary indrindra ny lafiny ara-pihetseham-po amin'ny toe-javatra toy izany, ary mazava ho azy ny fanakianana ny Gemara sy ny tsy firaharahan'ny mpianatra ireo lafiny ireo. Ny hatsiaka sy ny tsy firaharahiana hita taratra dia tsy takatry ny saina ary tsy azo eritreretina. Efa nahazatra antsika rehetra ny nandinika ny olan’ny raim-pianakaviana nanolotra ny zanany vavy kely ho an’ny lehilahy iray nahandro, vehivavy voarara amin’izao sy izao, agunot tsy misy lalan-kivoahana, “miraikitra amin’ny lampihazony” sy ny dinika litoanianina maro kokoa ao. ny Talmud.
Mamela ny tenako hilaza avy amin'ny traikefa aho fa ireo dia famerenana izay mampiavaka ny vehivavy bebe kokoa (sy mpanaraka, izay mitovy amin'ny zavatra iray ihany. Jereo ohatra amin'ny tsanganana 104 ary-315). Tsy ilaina ny milaza fa ny Litoanianina toa ahy dia afaka amin'ny fihetseham-po toy izany ao amin'ny BH. Manome toro-hevitra ho an'ny talen'io telenovela io mihitsy aza aho: Ho tsara, ohatra, izy ireo raha mamono ny vadin'ny rahalahy faharoa koa izy ireo ary manindrona antsy ny kibony, izay renin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny zanany vavy, izay antsasany. andevo sy ny antsasany afaka novonoin'i Garma izay eo anelanelan'ny teny sy ny fandrobohana ao amin'ny mikveh miaraka amin'ny loga telo misy rano paompy tsy misy dab izay toa ny endriky ny divay. Afaka nianatra avy amin'ny tsara indrindra izy ireo, izany hoe, inonatoerana. Mety nanan-karena ny fifanakalozan-kevitra izany ary nahasarika kokoa.
Fanakianana mitovy amin'izany amin'ny toe-javatra hafa
Ireo fanakianana ireo dia tsy miantefa amin’ny Talmoda sy ny mpianany ihany. Ao anaty tsanganana 89 Nanome ohatra momba ny tsikera mitovy amin'izany aho, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia tao anatin'ny tontolon'ny akademika-teknolojia. Ny tiako holazaina dia ny tantara fanta-daza momba ny fantson-dra ao amin'ny Technion (izay mety ho nisy sy noforonina mihitsy aza). Handika zavatra avy any aho.
nilaza Noho ny hetsika nataon'ny Pr. Haim Hanani avy ao amin'ny Technion, izay niafara tamin'ny fitsapana ny fikorianan'ny tao amin'ny Fakiolten'ny Injeniera Mekanika, dia nasaina nanamboatra fantsona mitondra rà avy any Eilat mankany Metula ireo mpianatra. Nanontaniana izy ireo hoe inona no fitaovana hanaovana azy, inona ny savaivony sy ny hateviny, ny halalin’ny tany handevenana azy sy ny toy izany. Ireo mpitantara ity tantara ity (ary izaho manokana dia nandre tamin'ny sofiko talanjona manokana ny olona sasany izay tohina ara-moraly tamin'ity raharaha ity. Tsy azo lazaina fa tena tohina tamin'ny fahatafintohinan'izy ireo aho) ny fitarainan'ny mpianatra teknikan'ny Technion, izay mazava ho azy fa efa ela no resy. mpaka sary olombelona (tsy toy ny PhD amin'ny miralenta sy ny toekarena ao an-tokantrano Manana fahatsapana ara-moraly tena mivoatra izy ireo, indrindra rehefa mamolavola fantsona izay hitarika ny lahatsorany mivantana amin'ny rafitry ny Gazety), mamaha ny fanadinana ary manolotra izany tsy misy hodi-maso ary manontany hoe nahoana no ilaina ny fantsona rà toy izany. Mba hampitomboana ny hagagany dia nilaza izy fa ny fanadinana toy izany dia nitarika ny fampidirana ny fianarana momba ny maha-olombelona amin'ny fandaharam-pianarana Technion. Toa nisy olona nandray an'io hevitra io ho zava-dehibe.
Ankoatra ny resaka tsiro sy hatsikana ataon'ny mpanoratra fanadinana mazava ho azy fa azo iadian-kevitra (na dia mahafinaritra aza izany raha ny fahitako azy), dia toa adala be amiko ny fanakianana. Inona no olana amin'ny fanontaniana toy izany?! Ary mba misy mieritreritra ve fa nikasa hanao toby fitanana ilay mpampianatra ary manampy ny mpianatra amin'ny famahana ny olan'ny fitaterana rà? Ireo mpianatra nahavita ny fanadinana no tokony haka sary an-tsaina fa izao no zava-misy sy fanoherana? Ny fananganana sy ny famahana ny fitsapana toy izany dia tsy maneho ny fahalotoam-pitondrantena, na ny haavon'ny fahatsapan'ny mpampianatra na ny mpianatra aza. Raha ny marina, na dia io fanakianana mampihomehy io aza dia tsy maneho ny fahatsapana ara-moraly avo lenta. Ny ankamaroany dia fandoavana hetra amin'ny fanambarana, ary tena adaladala, noho ny fahamarinan-toerana ara-politika sy ny fihetseham-po tsy ilaina.
Ankoatra ny fanontaniana hoe mety sy mitombina ve ny mametraka fanontaniana toy izany amin'ny fitsapana, dia tiako ny miady hevitra fa ireo mpianatra izay sendra azy io ary namaha izany tsy misy indray mipi-maso dia mitovy amin'ny manam-pahaizana halakhic izay mandalo toe-javatra toy izany. ilay nolazaiko tamin'io hodimaso mangatsiaka io. Resaka contexte io. Raha halakhic na siantifika-teknolojia ny contexte, ary mazava ho an'ny rehetra fa tsy misy olona mikasa ny hamono na hitondra rà eto, dia tsy misy antony eto amin'izao tontolo izao mba hangovitra na hifaly amin'izany ny ao am-pony. Aleo izy ireo mamela ny fisavana ho an'ny tena zava-nitranga. Raha misy olona mihozongozona ny tady dia tsy maninona. Ny tsirairay sy ny firafitry ny sainy, ary araka ny fantatsika dia tsy misy olona tonga lafatra. Fa ny fijerena izany ho toy ny toetra izay maneho ny fitondran-tenan'ny olona sy ny tsy fisian'ny horohoron-tany dia manondro io fitondran-tena diso io indrindra fa vazivazy ratsy.
"Lasa marani-tsaina, inona no hitany ho tsy misy dikany?"
Tsaroana ihany koa ny midrash ny angano Korach Zatzokal izay nitaraina momba an'i Moshe Rabbeinu (Mpitady tsara, Salamo a):
“Ary eo amin’ny seza fiandrianan’i Zima” no misy ranomandry, izay vazivazy momba an’i Mosesy sy Arona
Inona no nataon'ny gilasy? Ary nivory ny fiangonana rehetra, ka nisy nilaza hoe: Aoka ny fiangonana rehetra hanangona ranomandry ho azy; dia niteny taminy izy ka nanao taminy hoe: Ny mpitondratena anankiray teo amin'ny manodidina ahy, ary nisy kamboty roa vavy niaraka taminy; ary nanana saha iray izy. Tonga hiasa izy - hoy Mosesy taminy: Aza miara-miasa ny omby sy ny boriky. Tonga hamafy izy - hoy izy taminy: "Tsy hamafy hybrides ny nononao." Tonga hijinja sy hanao antontam-bato izy, ka hoy izy taminy: Asio fanadinoana sy solomaso. Tonga hanao fanorenana izy, dia hoy izy taminy: Manaova fanomezana sy ampahafolony voalohany ary fahafolon-karena faharoa. Nohamarinina ny sazy taminy ka nomeny azy.
Inona no nataon'ity mahantra ity? Nijoro sy nivarotra ny saha ary nividy ondry roa hanaovana ny lambany sy hankafy ny ombiny. Ary raha vao teraka izy ireo, dia tonga Arona ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny lahimatoa, ka hoy Andriamanitra tamiko: Ny lahimatoa rehetra izay teraka amin'ny ondry aman'osinao sy ny ondry aman'osinao dia atolory ho an'i Jehovah Andriamanitrao. Nanamarina ny sazy momba azy ary nanome azy ny fiterahana. Tonga ny fotoana hanety sy hanety azy - dia avy Arona ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny entona voalohany, izay nolazain'Andriamanitra hoe:
Ary hoy izy: Tsy manan-kery hanohitra io lehilahy io aho, fa mamono azy sy mihinana azy aho. Ary rehefa novonoiny izy, dia nanatona Arona ka nanao taminy hoe: Omeo ahy ny sandriny sy ny takolaka ary ny kibony. Hoy izy: Na dia efa novonoiko aza izy ireo, dia tsy nesoriko izy - ankivy ahy izy ireo! Ary hoy Arona taminy: Raha izany, dia Ahy avokoa izany, dia izao no nolazain'Andriamanitra: Ho anao ny fanaovana an-keriny rehetra amin'ny Isiraely. Natlan ary nankany aminy ary niala nitomany izy sy ny zanany roa vavy.
Izany no nahatonga azy tao anatin’izany fahoriana izany! Dia manao izany izy ireo ary mifikitra amin'i Gd!
Tena mandratra fo, sa tsy izany? Somary mampahatsiahy ny hevitra nolazaiko teo ambony io, na dia misy fahasamihafana aza eto. Ny tsikeran'ny Ice dia tena misy ao anatiny. Mety hamoaka zavatra amin'ny teny manodidina izy ary hamorona tantara mahavaky fo, saingy marina tokoa fa mety hitranga ny tantara toy izany, ary izany tokoa no torolalana halakhic amin'ny toe-javatra toy izany. Izany no mahatonga ny fanamby eto amin'ny fitondran-tenan'ny halakhah, ary fitakiana matotra izany. Efa im-betsaka aho no nanonona anao Nilalao ny Israely, Ilay mpahay simia avy any Jerosalema, izay nanamboatra tantara momba ny fahaketrahana ara-pitondran-tenan’ny halakhah sy ny fivavahana, ary niteraka korontana. Nisento ny relijiozy rehefa hita fa tsy nisy ary tsy noforonina ny tantara toy izany, saingy nanontany tena aho hoe nahoana izy io no ilaina. Ny halachah tokoa dia mandrara ny habaka amin'ny Sabata hamonjena ny ain'ny jentilisa. Eny tokoa, ny lalàna dia mitaky ny vehivavy Cohen ho voaolana amin'ny vadiny. Ka na tsy tena nisy aza izany dia fanakianana ara-dalàna tanteraka.
Amin'io lafiny io, ny fanakianan'i Shachak sy Korach dia tena mitovy amin'ireo tsikera hitanay etsy ambony izay mifandraika amin'ny raharaha petra-kevitra sy ny fitovian-jo tena mitombina aminy. Tsy misy ifandraisany amin'ny haavon'ny fitondran-tenan'ny olona na ny halakhah izany.
Andeha isika hifantoka amin'ny olana amin'ny famerenana ny fantsona ra na telenovela eny an-tsehatra. Tranga petra-kevitra tsy tena nitranga izany. Manoloana ny tranga tena izy dia ataoko fa tsy hijanona ho tsy miraika amin'izany isika. Ny tsy firaharahiana dia noforonina eto noho ny toetry ny petra-kevitra momba ny raharaha izay mazava ho an'ny rehetra voakasik'izany, ary noho ny tontolon'ny adihevitra. Intellectuel-professionnelle ny hevitra ipoiran'ireo tranga ireo. Ny fanontaniana momba ny injeniera dia adika amin'ny teny manodidina azy ho fanamby ara-teknolojia informatika, ary marina fa tsy misy manelingelina ny tanjon'ny kajy (satria mazava amin'ny rehetra fa tsy misy izany. Raha ny marina dia misy ny fitsapana ny mpianatra. fahaiza-manao). Toy izany koa ny telenovela eny an-tsehatra. Mazava ho an'ny rehetra fa tranga vinavina natao hanamafisana ny fomba fijery halakhic ity. Ny fiheverana ny raharaha petra-kevitra toy ny tena zava-mitranga dia raharahan-jaza, sa tsy izany? Ny ankizy dia matetika mandray ny tantara ho toy ny tena zava-misy. Tokony ho takatry ny olon-dehibe fa tsy izany no izy. Raha ny hevitro dia mitovy amin'ny fanontaniana momba ny raharaha Talmudic toa an'i Gamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX sy Yevamot Katz XNUMX: XNUMX) izany, na Hittin izay nidina tany anaty kirihitra (Minchot Set XNUMX: XNUMX), izay manontany tena hoe ahoana no mety hisian'ny tranga toy izany. mitranga. Rehefa mandinika ny teny manodidina dia tokony hazava fa tsy misy olona milaza fa izany no nitranga na mety hitranga. Ireo dia tranga hypothetical izay natao hanadiovana ny fitsipika halakhic, toy ny raharaha laboratoara amin'ny fikarohana siantifika (jereoArticles Ao amin'ny Okimas).
Raha fintinina, ny olana amin'ireo hevitra ireo dia ny fiheveran'izy ireo fa ny olona iray dia tokony hitondra ny raharaha hypothetical izay tonga eo anoloany toy ny hoe misy zava-mitranga marina eto. Azonao atao ny manome ohatra avy amin'ny sarimihetsika na boky iray izay mamaritra ny toe-javatra toy izany. Mariho hoe iza no tsy hankamamy ny Baiboly na ny fahitana ny toe-javatra toy izany. Inona no maha samy hafa azy? Rehefa dinihina tokoa, ao amin'ny sarimihetsika na boky dia tokony hiaina fihetseham-po toy izany ary hiditra amin'ny toe-javatra iray. Ny valin'izany dia araka ny hevitro: 1. Ny anaran'ny contexte dia ara-javakanto, midika izany fa ny mpanjifa (mpijery na mpamaky) dia tokony hiezaka hiditra amin'ny toe-javatra ary hiaina izany. Izany no fototry ny fandosirana ara-javakanto. Saingy tsy misy izany amin'ny tontolon'ny siansa na ny teknolojia-akademika. 2. Na dia ara-dalàna aza ny fihetsehana ara-tsaina toy izany eo amin’ny lehilahy (na vehivavy), dia tsy misy vidiny izany. Raha mitranga izany - dia tsara (tsy misy tonga lafatra, tadidio). Fa ny filazana avy amin'ny olona amin'ny anaran'ny fitondran-tena fa tsy maintsy hitranga amin'izy ireo dia fanambarana hafa tanteraka. Ny mahita olona tsy manana izany ho toy ny kilema ara-moraly dia tena tsy misy dikany amiko.
Raharaha tena izy: ny maha-zava-dehibe ny fanapahana
Niady hevitra aho fa ny fidiran'ny saina amin'ny raharaha hypothetical dia resaka fahazazana. Fa ankoatr'izay dia tiako ny miady hevitra ankehitriny fa misy refy manimba azy ihany koa. Rehefa nipoitra ireo fanakianana ireo mpianatra dokotera voalaza etsy ambony ireo, dia niezaka ny nampiditra azy ireo hatrany hatrany aho ny maha-zava-dehibe ny fialana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina amin'ny toe-javatra rehefa miatrika ny vatsim-pianarana halakhic. Tsy vitan'ny hoe tsy misy dikany ny fandraisana anjara ara-pihetseham-po toy izany, fa tena manimba. Ny fandraisana anjara ara-tsaina sy ara-pihetseham-po dia mety hitarika amin'ny fehin-kevitra halakhic (sy ara-teknolojia) diso. Ny mpitsara izay manapaka ny raharaha noho ny fihetseham-pony dia mpitsara ratsy (raha ny marina dia tsy manapaka mihitsy izany. Mivazavaza fotsiny).
Marihina fa eto aho dia efa miresaka momba ny fanondroan'olombelona amin'ny tranga tena izy izay eo anoloako, fa tsy tranga hypothetical fotsiny. Raha sendra trangan-drahalahy sy anabavy niara-namoy ny ainy tamin'ny loza mahatsiravina aho, dia tranga tena nisy tokoa izany raha ny zava-misy, ka amin'ny tranga toy izany dia tsy maintsy misy lanja ny fahatsapan-tena manoloana ny refin'ny olombelona ao anatiny. Eto dia azo antoka fa misy lanja sy maha-zava-dehibe ny fitsaboana ity tranga ity amin'ny ambaratonga rehetra miaraka: ny intellectuel-halakhic, ny intellectuel-moraly ary ny human-experiential. Saingy, na dia amin'ny tranga tena izy aza, dia mety amin'ny dingana voalohany ny mifantoka amin'ny fiaramanidina voalohany ary manapaka ny roa hafa. Tokony hieritreritra mangingina ny amin’ny raharaha atrehany ny mpitsara. Ny zavatra lazain'ny halakhah dia tsy misy ifandraisany amin'izay lazain'ny fihetseham-po (ary raha ny hevitro dia tsy izay lazain'ny moraly akory), ary tsara izany. Ny mpitsara dia tokony hanapaka ny lalàna amin'ny fahatoniana misaraka, ary noho izany dia manan-jo hitantana ny fahamarinan'ny Torah. Ao amin'ny sehatra aorian'ny famakafakana halakhic mangatsiaka, dia misy toerana hidirana ara-tsaina amin'ny toe-javatra sy ny lafiny ara-moraly ary maha-olombelona, ​​ary handinihana izany amin'ireo fomba fijery ireo ihany koa. Midika izany fa rehefa manangana safidy maromaro ny famakafakana halakhic voalohany, dia afaka mandinika ny fihetseham-po sy ny refin'ny maha-olombelona ary ny fitondran-tena mba hanapahana hevitra eo amin'izy ireo sy hisafidianana ny didy azo ampiharina. Ny fihetseham-po dia tsy tokony handray anjara amin'ny famakafakana lojika, fa ny ankamaroany dia aorian'izany. Ankoatra izany, afaka mahita ny hasarobidin'ny fizarana sy fiaraha-miory amin'ny fijalian'ilay olona eo anoloanao ianao, na dia tsy misy dikany halakhic aza izany. Fa izany rehetra izany dia tsy maintsy atao amin'ny fiaramanidina parallèle, ary aleo koa tara amin'ny fanapahan-kevitra halakhic voalohany. Ny fandraisana anjara ara-pihetseham-po amin'ny didim-pitsarana dia tsy ilaina mihitsy.
Tsy hiverina eto amin'ny antsipiriany amin'ny filazana hafa efa nataoko imbetsaka aho (jereo ohatra eo amin'ny tsanganana 22, Ary ao amin'ny andian-tsanganana 311-315), Tsy misy ifandraisany amin’ny fihetseham-po sy tsy misy idiran’izany fitondran-tena izany. Ny moraly dia resaka ara-tsaina fa tsy ara-pihetseham-po. Indraindray ny fihetseham-po dia famantarana ny fitarihana ara-moraly (firaisana ara-moraly), saingy tena olana lehibe izany, ary zava-dehibe ny mitandrina amin'ny fanakianana azy ary tsy manaraka izany. Hajao izy ary ampiahiahy azy. Amin'ny faran'ny andro dia tokony ho ao an-doha ny fanapahan-kevitra fa tsy ao amin'ny fo, fa ny loha ihany koa no tokony handinika izay lazain'ny fo. Ny hevitro dia ny hoe tsy misy dikany ny famantarana amin'ny fahatsapana ara-pihetseham-po. Toetra maha-olombelona izany, ary toy izany no zava-misy. Tsy misy vidiny anefa izy io, ary tsy tokony hanahy momba ny fitondran-tenany sy ny hasarobidin’izany ireo izay tsy nahazo izany.
Manoloana izany dia miady hevitra aho fa na dia amin'ny dingana faharoa aza, aorian'ny fanadihadiana halakhic voalohany, dia tsy misy toerana manan-danja ho an'ny fihetseham-po. Ho an'ny moraly angamba eny, fa tsy noho ny fihetseham-po ( per se. Fa angamba ho famantarana sy ny sisa). Mifanohitra amin'izany, ny fandraisana anjara ara-pihetseham-po dia fitsapana fitsapana ho an'ny fitaka tsy mety sy ny fivilian-tsaina, ary ny fandraisana fanapahan-kevitra diso.
Ny fehin-kevitra avy amin'izany rehetra izany dia ny hoe rehefa mianatra resaka Talmudic halakhic dia tsy misy dikany ny fandraisana anjara ara-pihetseham-po, ary tokony hiezaka mihitsy aza ny handresy ny hetsika ara-tsaina toy izany na dia misy aza izany (miresaka momba ireo izay tsy mbola naharesy aho. ary zatra azy). Ao amin'ny didim-pitsarana halakhic azo ampiharina (izany hoe fanapahan-kevitra momba ny tranga iray izay tonga eo anoloantsika), izay tokony hampiato ny fihetseham-po sy ny fitondran-tena, ary angamba omena toerana amin'ny dingana faharoa (indrindra fa ny fitondran-tena.
Misy ny tohan-kevitra eo amin'ny sehatry ny fitaovana fa ny olona iray izay manao ny tsy mitsabo olona amin'ny hypothetical tranga toy izany dia tsy hanao toy izany koa amin'ny raharaha tena izy. Tena misalasala aho izany. Toa teny tsara ho an'ny fitahiana fito izany amiko, ary tsy hitako izay mahamarina izany. Na ahoana na ahoana, na iza na iza milaza izany dia tokony hitondra porofo amin'ny teniny.
Mety hisy filazana mitovitovy amin'izany koa momba ny fahazaran'ny mpanao asa tanana. Ny Gemara dia milaza fa ny mpanakanto, ny dokotera na ny olona iray nifampiraharaha tamin'ny vehivavy, "tamin'ny fanandevozana azy", ary noho izany dia namela azy zavatra izay voarara amin'ny lehilahy hafa (singularité na fifandraisana amin'ny vehivavy sy ny toy izany). Ny fahasahiranana amin'ny asany matihanina dia mandreraka ny fihetseham-pony ary manakana ny fandikan-dalàna sy ny fisaintsainana voarara. Tsy haiko raha manjavozavo kokoa ny firaisana ara-nofo amin'ny mpitsabo aretim-behivavy noho izany, na dia mihaona amin'ny vehivavy iray amin'ny tantaram-pitiavana sy tsy matihanina aza izy. Misalasala aho fa contexte hafa io, fa mila fandinihana. Hain'ny olona ny manao fisarahana sy ny fampitandremana, ary amin'izany heviny izany dia mianatra ao amin'ny Abidathiyahu Tridi ihany koa i Dayan. Rehefa mirotsaka amin'ny asany ny olona iray dia hainy ny manala ny fihetseham-pony, ary tsy midika izany fa manjavozavo kokoa izy ireo amin'ny toe-javatra hafa. Mazava ho azy fa ny mpanakanto izay variana amin'ny zavakanto dia toe-javatra lavitra kokoa noho ireo toe-javatra voalaza etsy ambony amin'ny fianarana halakhic, satria ho an'ny mpanakanto dia vehivavy sy toe-javatra tena izy ireo, raha ho an'ny manam-pahaizana dia tranga hypothetical ireo. Noho izany, na dia hitantsika aza fa mihena ny fihetseham-pon'ny mpanakanto, tsy voatery midika izany fa izany no mitranga amin'ny manam-pahaizana. Mitovy kokoa amin’ny mpitsara iray izay manapaka ny fihetseham-pony angamba izy io, satria miatrika raharaha tena izy ny mpitsara nefa manao izany amin’ny sehatra matihanina. Any no azo lazaina fa ao anatin'ny kantony dia sahirana izy.
Azo lazaina fa ny mpianatra iray izay miatrika toe-javatra toy izany ary tsy mamporisika ny fihetseham-pon'ny olombelona mifandraika aminy dia tsy miditra amin'ny toe-javatra. Adihevitra hanoherana azy eo amin’ny sehatry ny akademika izany fa tsy eo amin’ny lafiny moraly. Ny filazàna dia hoe sahirana mianatra izy fa tsy hoe olona maloto fitondran-tena. Heveriko fa tsy izany no izy. Ny olona iray dia azo antoka fa afaka miditra amin'ny toe-javatra iray amin'ny tontolon'ny fanabeazana na dia tsy ao anatin'izany aza izy amin'ny lafiny maha-olombelona. Mazava ho azy fa miankina amin'ny fiheverana ny halakhah ho asa matihanina-teknika izay tsy misy fiaramanidina ara-pihetseham-po (afa-tsy amin'ny dingana faharoa, sns.). Na izany na tsy izany, lesoka ara-moraly azo antoka fa tsy hitako eto.
 Tsy azo antoka fa misy ifandraisany amin'ny toetran'ny vehivavy izany. Mety ho noho ny zava-baovao izany, satria tsy zatra ireo olana ireo hatramin'ny fahazazana ny vehivavy.
 Ny vokatr'izany mihitsy no raisina raha ny hevitro. Tena tsy mampidi-doza ho an'ny mpianatra ao amin'ny Technion ny mianatra momba ny maha-olombelona. Saingy tsy misy ifandraisany amin'izany sy ny momba ny lalan-drà. Tsy mampiseho olana tokony hovahana ilay raharaha, ary raha misy olana toy izany, dia tsy hitondra anjara biriky amin'ny famahana azy ny fianarana momba ny maha-olombelona.
 Rashi tany an-efitra XNUMX, p.
Valiny ho an'ny Absolute ao amin'Andriamanitra
Valin'ny fanjakana jiosy
Valiny tsy misy filazana momba an'izao tontolo izao izay tsy azo lavina
Hevitra 45 momba ny "Saina sy Fo - Fihetseham-po amin'ny fandalinana sy ny fitsarana ny Halacha (Tsanganana 467)"
T. Benisan 10 - 04/2022/01 amin'ny 56:XNUMX
Ny raharaha halakhic voalaza eto dia voaheloka raha ny zava-misy, raha tsiahivina, taorian'ny famonoana ny fianakavian'ny Maklef tao Motza nandritra ny zava-nitranga tamin'ny XNUMX.
Faharoa ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/14 amin'ny 39:XNUMX
Miala tsiny fa diso aho, niresaka momba ny famonoana ny fianakaviana Unger tao Safed, iray amin'ireo valiny ao amin'ny Ahiezer HG Lag.
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/14 amin'ny 53:XNUMX
Ahoana no ahitanao ny valiny? Tiako ny mahita loharano iray. Misaotra.
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/17 amin'ny 23:XNUMX
Fintino fohifohy izay voalaza tao.
A. Ny tranga niseho tao amin'ny tsanganana:
[Nisy lehilahy nanambady ny zanak’anabaviny sy ny vadiny hafa. Raha maty izy dia tsy afaka miara-mipetraka amin'ny zana-drahalahiny (public) ny rahalahiny ary noho izany dia tsy mahazo fanalan-jaza sy fanalan-jaza izy sy ilay vehivavy hafa sahirana. Raha maty talohan’ny vadiny ny zanakavavin’ny zana-drahalahiny, ary maty ny vadiny, dia tsy menatra ilay vehivavy hafa ka mila zaza amin’ny fotoana hahafatesany.]
Ny fehezan-teny ao amin'ny Gemara dia raha tsy fantatry ny olona hoe iza no maty voalohany, na ilay lehilahy no maty voalohany ary ny vadiny (zanak'olo-mpiray tam-po aminy) mbola velona ary avy eo ny vadiny hafa dia maty noho ny fahavetavetana, na ny vadiny maty voalohany ary ny lahy dia maty ary ary ny vadiny hafa dia manan-janaka. [Ary ny lalàna dia satria misy fisalasalana hoe tsy maintsy atao ao Bibom na voarara ao Bibom avy eo lobaka fa tsy Bibum].
B. Ny tranga tao Ahiezera:
[Ny lehilahy izay maty ary tamin'ny fotoana nahafatesany dia namela tsirinaina mahavelona na foetus dia afaka amin'ny fahavetavetana ny vadiny. Fa raha tsy nanan-janaka mihitsy izy na maty daholo talohan'ny nahafatesany dia tsy maintsy bibom ny vadiny. Raha maty izy ka namela zaza teraka taorian’ny fahafatesany ary velona adiny iray monja aza ka maty, na namela zanakalahy efa ho faty, dia taranaka ho an’ny zava-drehetra izany, ary afaka amin’ny fahavetavetana ny vadiny.]
Ny voaheloka tao Ahiezera dia raim-pianakaviana maty ary tamin'ny fotoana nahafatesany dia namela mpihinana iray maty indray andro taorian'ny rainy, na zanakalahy mpihinana hena no heverina ho taranaka ho an'ny zava-drehetra ho faty ary ny vehivavy maty dia afaka amin'ny fahavetavetana, na a mpihinan-kanina (izay mety ho faty ao anatin'ny XNUMX volana). [Mihevitra i Rose Garden fa tsy heverina ho velona mihitsy ny biby mpiremby ary ratsy noho ny fahafatesana ary tsy maintsy bibom ilay vehivavy maty. Ahiezer dia nanaporofo tamin'ny fanampim-panazavana fa voaroaka tao Maybum i Ben Tripa]
Misy itovizana ny hoe nisy fianakaviana roa maty tao anatin’ny fotoana fohy (noho izany antony izany).
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/17 amin'ny 27:XNUMX
Efa pejy androany ity 🙂
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/19 amin'ny 06:XNUMX
Heveriko fa ny valintenin'i Ahiezer an'i HG eo afovoan'ny CJ no tian'i Nadav holazaina:
Tamin'ny volana Adar XNUMX (c) momba ny fanontaniana momba ny Darg izay tamin'ny andron'ny famonoana tany Iraka dia novonoina ny rainy ary avy eo ny zanany lahy izay niaina indray andro, izay notsatohan'ireo mpamono olona antsy sy nanindrona ny havokavoka, raha navela hanao izany. manambady tsy misy fitrandrahana, toy ny tao amin'ny valin'ny Ginat Vardim Ny Sephardi dia nentina teo amin'ny lohalohan'i Yosef sy Harka'a ary tany Petah Tikva, izay mety hiharatsy.
Eto aho dia nahita tao amin'ny Responsa Ginat Vardim ary tsy nahita porofo hanavao izany aho, fa avy amin'ny mpivavaka ao Matanitin maty sy notarihina fa tsy avy amin'ny Tani Prefa, izany hoe tsy voaroaka i Detrapa. Na izany aza, avy amin'ny Toss D. Ary raha ny amin'ny Toss, dia toa matin'ny lehilahy iray nohazavain'ny Dalarbanan Darbav Hoy tao amin'ny Synedriona ho rembiny izy, ka i Maimonides ao amin'ny PB avy amin'ilay mpamono Dahurgo dia tsy novonoina ho rembiny, ary ny Demprashim GC iray hafa. Da'af izay tombana ary ho faty izy. Ary mazava tsara koa fa ny tranon'ny Hari Batos Yavmot, izay misy an'i Demguide amin'ny toerana tsy misy fiafaran'ny fiainana, ary ao amin'ny B.H. A.H. Raha ny marina, dia voaporofo amin'ny tenin'ny Toss, modely izay maty sy tarihin'ny olona toy ny rembiny, ary toy izany koa amin'ny fanafihana ao amin'ny CORAN'i David, izay ampiana amin'ny S. Judgments We aza miraharaha izay norobainy, fa ny maty sy ny mpitari-dalana dia mila bib ary voaroaka amin'ny bib. Amin'ny ankapobeny dia mahagaga fa raha misy zafiafy no mihevitra fa mila avotra izy, ary misy koa ny fanalan-jaza amin'ny vadin'ny rahalahy iray izay manan-janaka lahy maty ary hatramin'ny nitondrany ny tenin'ny Ny Toss Reid amin'ny Shabbat KK dia azo antoka fa tsy tokony ho tsapa mihitsy noho ny fisalasalan'ny misalasala, ary tsy mila avotra ary avela hanambady. + Shum ao amin'ny Beit Yitzchak responsa, Chiv. A.A. ao amin'ny Beit Yitzchak responsa, izay notontosain'ny G.C.
Saingy tsy izany no raharahantsika. Na dia mety ho gaga amin'ny fomba fitsaboana sy ny tsy fisian'ny fanondroana ny refy ara-pihetseham-po aza ny olona iray.
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/19 amin'ny 31:XNUMX
[Momba ny fiafaran'ny fanamarihanao momba ny fomba fitsaboana, ny fitsidihan'ny Treasure of Fahendrena dia manambara fa ny mpanontanian'i Ahiezera dia Raby Zvi Pesach Frank izay nanontanian'ny raby Safed momba ny toerana nisehoan'ny zava-nitranga, ary izy ireo dia efa nanao izany. naneho ny fahatairana, sns.
Nandritra ny fotoana fohy dia nieritreritra aho fa mety hitovy amin'ny tantaran'ny mompera isan'andro izay namono ny namany teo amin'ny ondrilahy, ary koa ny rainy dia nivezivezy niresaka momba ny maha-kosher ny antsy, momba izay lahatsoratra sy toriteny nosoratana, fa tsy mitovy mihitsy satria famonoana fahavalo.
Eo anelanelan'ny valiny halakhic sy toriteny eulogy
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/23 amin'ny 57:XNUMX
Tamin’ny XNUMX Nisana XNUMX (Raby Yosef Caro)
Ny fifanakalozan-kevitra rehetra momba ny fihetseham-po na ny tsy fihetseham-pon'ireo mpitsara an'i Halacha amin'ny fototry ny fandrafetana azy ireo amin'ny valinteniny - dia tsy misy dikany. Naneho ny fientanam-pony ireo olon-kendry tamin’ireo hetsika fampiantsoana tamin’ny toriteniny teo anivon’ny fiaraha-monina, izay natao hanaitra ny sain’ny mpihaino. Ao amin'ny valiny halakhic dia halakhic 'maina' ny fifanakalozan-kevitra. Nanjaka nitokana ary nitaky nitokana.
Tsara homarihina fa vitsivitsy monja amin’ireo asa soratr’ireo olon-kendrin’ny Israely no natao pirinty, anisan’izany ny vidin’ny fanontana. Noho izany, miezaka ny manonta ny fifantenana izay manana zava-baovao lehibe. Na zava-baovao amin'ny halakhah na zava-baovao amin'ny angano. Maneho fifaliana noho ny vaovao mahafaly sy alahelo noho ny tsaho ratsy - tsy misy zava-baovao, ny olona rehetra dia mahatsapa izany, ary tsy ilaina ny manalava izany rehefa manampy takelaka. Na dia amin'ny zava-baovao aza dia tsy nanontany kely ny kely.
Salama ry zalahy kely.
Fanitsiana sy fanehoan-kevitra
Fahatelo ambin'ny folo amin'ny Nissan 14 - 04/2022/00 amin'ny 06:XNUMX
Fehintsoratra 1, andalana 1
… Araka ny teniny…
Marihina fa indraindray ny fibebahana dia maharitra amin’ny teny alahelo, rehefa terena hanjaka amin’ny fomba masiaka. Rehefa tsapan'ny mpanelanelana fa na dia eo aza ny faniriany lehibe dia tsy afaka mamonjy izy - dia haneho ny alahelony koa izy indraindray amin'ny fanapahany.
Ohatra, ny Raby Chaim Kanievsky dia nanome toromarika fohy ny toerany tamin'ny teny vitsivitsy, fa ny Raby Menachem Burstein dia nilaza fa nisy tranga izay nilazan'ny Raby Kanievsky hoe: 'Oh, oh, oh. Tsy avelako '.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 amin'ny 25:XNUMX
Nisy zavatra nitovitovy tamin'izany koa rehefa nisy tsy nety nanontany an'i Rosh Yeshiva ny fomba iatrehany ny olan'ny PP nefa tsy nahatonga azy ireo hanao firaisana ara-nofo. Namaly izy fa tsy miatrika ny zava-misy ireo mpianatra, fa amin'ny fitsipika halakhic momba izany.
Valin-teny hafahafa tokoa, satria ny filazalazana ao amin'ny Mishnah dia tsy "hetsika efa nisy".
Ary mihoatra noho izany, Shlomi Emuni Yisrael, tarihin'ny manam-pahaizana mianatra, dia manentana ny fianakaviana hanampy fianakaviana.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 amin'ny 27:XNUMX
Ireo olana ireo dia toy ny "fitsapana fianjerana" ho an'ny fiara, hitsapana ny fanoherana amin'ny toe-javatra tafahoatra. Tsy hoe matoky izahay fa handalo zavatra toy izany eny an-dalana ny fiara rehetra
T. Benisan 10 - 04/2022/08 amin'ny 29:XNUMX
A. Ny famakafakana ataonao dia tsy mahatsikaritra ny hatsikana amin'ny fanamarihako (sy doc: telenovela! Ao anatin'ny angon-drakitra mahafinaritra momba ny script nomen'ny trakta dia azonao atao ny manoratra bebe kokoa.).
B. Na izaho sy ny mpianatry ny dokoteranao (ireo izay tsy misoratra anarana amin'ny lahatsoratra ho an'ny gazety-science-nenenina, ary tsy mianatra any amin'ny Departemantan'ny Macrame sy Economy an-trano. Iza no nilaza ny materialisma sy ny chauvinism ka tsy nanaiky izany?) Fantaro tsara ny fenitra avo roa heny. . Araka ny voalaza, dia mankafy izany mihitsy aza ny sasany amintsika. Eny tokoa, ny ankamaroantsika dia sambany miatrika olana toy izany, ary toa ahy fa ny mpianatra mahay sy tsotra dia tsy mahazo tombony afa-tsy amin'ny fijerintsika gaga sy vaovao ("vahiny") satria izy dia voalohany sy tsy zatra ary maso mahazatra. Zava-dehibe ho an'ny rehetra ny fahaizana ara-pahasalamana mijery zavatra vaovao. Aza matahotra, ny manam-pahaizana sy mpitsara tsara kokoa (fa tsy transgender) no nivoaka tao.
fahatelo. Na izany aza, ny manam-pahaizana dayan sy mpitsara dia tsy tokony hitomany mafy sy hanaisotra ny tasy eo am-pianarana, fa hampiasa ny sainy sy ny fahaizany manatsoaka hevitra sy mianatra. Miresaka (miresaka) momba ny fijery roa sy salama aho. Eny, na ny wink aza dia miasa. Tsy ranomaso fotsiny.
D. Ary tsy ho mpisorona vavy toy ny tompon'ny tranom-bahiny? Mandehana ary fantaro ny endrik'ireo didim-pitsaran'ny Fitsarana Tampony, araka ny toerana misy azy ireo, hamaha olana lehibe izay indraindray mifandray amin'ny loza isan-karazany na hafa. Ny famakafakana ara-dalàna dia ho eo amin’ny fahamatorany rehetra, ary tsy mihemotra amin’ny hamafin’ny dinika, dia hisy hatrany ny fampahafantarana fohy na fanehoan-kevitra miaraka izay mifandray amin’ny soatoavina sy ny lafiny moraly.
Andriamanitra. Ohatra tsara amin'ny vazivazy ratsy ny fanontaniana momba ny reniranon'ny rà sy ny sodina. Mikasika ny adihevitra tsy tapaka eto, momba ny fanamavoana sy ny tsy fisian'ny lanjany eo amin'ny tontolo iainana, ny atmosfera ary ny fanabeazana.
T. Benisan 10 - 04/2022/09 amin'ny 31:XNUMX
Salama ny biby.
A. Tena tsy diso aho. Mifanohitra amin'izany, nanoratra momba ny fiderana sy ny fankafizana ny dika mitovy aho ary azoko tsara ilay hatsikana. Ary na izany aza, avy amin'ny dihy dia takatro fa nisy feo mitsikera, ary mazava ho azy fa marina aho. Ny fanamarihanao eto dia manambara mazava izany. Ny totalin'ny gemara dia tsy ahitana fampidirana poetika ny dikan-teny Cheshin.
B. Azo antoka fa fomba fijery azo amboarina, fa matetika tsy mahazo tombony amin'ny ambaratonga halakhic. Naneho hevitra momba izany aho tamin'ny faran'ny tsanganana. Mifantoka amin'ny tsikera ara-moraly tsy misy dikany aho.
fahatelo. Tsapako fa fijery roa izany, ary noresahiko izany. Ny fanontaniana natrehiko dia ny tsy fisian'ny fiaramanidina faharoa mifandraika amin'ny raharaha hypothetical tokony hampanahy sa tsia.
D. Ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony, tsy toy ny mpitsara, dia miraharaha ny lalàna fa tsy ny halakhah. Ao amin'ny lalàna dia misy lanja bebe kokoa noho ny halakhah (tsy mety foana) ny fihetseham-pony. Ankoatr'izay, ny jurisprudence Halachic dia mifandraika amin'ny raharaha azo ampiharina, ny Gemara dia tsy manao izany. Raha ny teniko dia nijoro ho an'ity fizarana ity aho.
Andriamanitra. Nolazaiko ny fanakianana ny vazivazy ratsy, ary nilaza mazava fa tsy izany no zakako. Ny fanontaniana noresahiko dia ny hoe misy ve ny fanakianana ara-moraly.
Farany, ny fiampangana ny maha-zava-dehibe sy ny chauvinisme dia mahazatra sy tsy misy dikany (matetika ampiasaina tsara rehefa lany ny hevitra fototra). Rehefa mitatitra ny zavatra niainako aho dia miresaka momba ny zava-misy. Raha toa ka mavesa-danja ny vokatra, dia mety ho marina ny substantive. Ny fomba hiatrehana izany dia tsy ny fandavana ny vokatra na ny fanomezana tsiny ny votoaty, fa ny miady hevitra amin'ny fomba mitombina fa tsy marina ny zava-misy. Raha nikasa hanao izany ianao dia tsy tsikaritro tamin'ny teninao ny adihevitra toy izany. Iray amin'ireo aretin'ny mponina malemy (ny vehivavy amin'ity toe-javatra ity dia tena vahoaka malemy, tsy omena tsiny foana. Eto aho dia vonona ny hanaiky amin'ny ampahany ny fehezan-teny maharikoriko "malemy"), dia ny fanoherana ny famaritana ny zava-misy fa tsy ny fifampiraharahana. ny zava-misy. Nanoratra momba izany aho momba ny vatsim-pianarana ho an'ny vehivavy tamin'ny voalohany, ary ny ankamaroan'ny vehivavy namaky azy dia tafintohina fa tsy nanao tsoa-kevitra ilaina ary niezaka ny hanatsara. Prescription andrana entina hahatsiarovana ny zava-misy io (raha heverinao fa tsara dia tsy voatery ho ratsy eo imasonao ny fahatsiarovana fa avy eo tsy hitako izay iampangana ahy).
T. Benisan 10 - 04/2022/10 amin'ny 05:XNUMX
Tsy ny Gemara no fanakiako fa ny fomba fijery manam-pahaizana-Litoanianina izay maneso ny fangatahana fanondro roa. Ny ohatra avy amin'ny mpitsara dia tsy voatery mankany amin'ny tononkalo fanta-daza nataon'i Cheshin, manana ohatra mahomby sy matotra kokoa izy io, satria fantatrao fa sahirana aho amin'izao andro izao amin'ny fampianaran'ny jiosy malala taorian'ny nahazoany diplaoma tao amin'ny Fitsarana Tampony ambony. izay zavatra mendrika hojerena.
Niampanga anao aho fa mifandray amin'ny endrika fa tsy amin'ny votoaty, izany hoe, mahagaga - indray, ny mitsiky. Na iza na iza miziriziry amin'ny fihomehezana ireo mpikambana ao amin'ny orinasany dia tokony hiahiahy ho manana adihevitra tsy dia mahomby. Na, raha ampitahaina amin'ny fitenin'ny fahamasinanao: "Ny tsiky etsy ambony dia mahazatra sy tsy misy dikany (matetika ampiasaina tsara rehefa lany ny hevitra fototra)."
Mazava ho azy fa amin'ny fampiharana dia sendra an'io karazana valinteny avy amin'ny mpianatra maro io aho, ary manamarina ny teoria toy izany sy toy izany, manohitra ny fomba fanambaniana fotsiny aho (tsy toy ny mpianatra PhD amin'ny miralenta sy ny toekarena ao an-tokantrano, izay tena nampitombo ny fahatsapana ara-moraly, indrindra rehefa fandrafetana fantsona mankany amin'ny lahatsoratra an-gazety). Ho an'ny siansan'ny nenina ”), izany hoe niverina indray isika, ary amin'ity indray mitoraka ity dia hanonona ny fiteniko masina aho," amin'ny adihevitra tsy tapaka eto, momba ny fanamavoana sy ny tsy firaiketam-po zava-dehibe amin'ny teny manodidina, ny atmosfera ary ny fanabeazana ”.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 amin'ny 17:XNUMX
Saingy tsy hita ao amin'ny Gemara mihitsy ny fanondro roa. Tsy noforonin'ny Litoanianina izany. Ny manam-pahaizana Litoanianina ihany no mifikitra amin'izay misy, ary ny filazany dia hoe ara-dalàna tanteraka ny fanondroana roa tonta fa tsy raharahan'ny fandinihana ilay olana, ary azo antoka fa tsy manondro hatsarana ara-moraly na kilema.
Tsy azoko ny filazanao momba ny fomba. Tsy misy mitsiky eto. Ireo dia tohan-kevitra mahazatra an'ireo adala / fahaiza-manaon'ny lahy sy vavy / sampana. Izany no ataon’izy ireo saika amin’ny fotoana rehetra. Ny zavatra nolazaiko momba ny vehivavy rehetra, eny fa na dia ireo izay tsy mianatra momba ny lahy sy ny vavy (ny ankamaroany dia toa ahy), dia nilaza aho fa mahazatra ny vehivavy ny hevitra toy izany, ary heveriko fa ireo no zava-misy nipoitra tamin'ny traikefako. Tsy misy ady hevitra eto fa fandinihana ny zava-misy.
Talata Nissan 10 - 04/2022/15 amin'ny 47:XNUMX
Eny tokoa, tamin'ny nanoratako an'i Saraha dia tsy misy lesoka ara-moraly eto, hitako tao amin'ny Facebook ny iray amin'ireo manam-pahaizana naroson'izy ireo momba ireo ohatra mitovy amin'izay entin'i Tractate Yavmot hatrany amin'i Robena sy ny fanolanana azy, mba ho mendrika ny hitazonana izany. ny voninahitr’i Robena sy Simona, ary nanome ohatra ho solon’i Aridta sy Delfona ary ireo zanakalahin’i Hamana folo hafa. (Etsy ankilany, misy toe-javatra iray izay nolazaina fa noho ny Porima ary tsy tiany akory izany) Ny hiampangana ny mpianatra miralenta fa tsy tena fikasana izy ireo fa ny famoahana lahatsoratra no tanjony dia fanalam-baraka izany fa tsy a fandinihana ny zava-misy.
T. Benisan 10 - 04/2022/10 amin'ny 23:XNUMX
Sharp toy ny taloha. vita tsara.
Misy hevitra tsy voavaha:
A. Tena tsy hita ny vazivazin'ny biby fiompiny. (Hanaiky aho fa tsy nahita izany koa aho tamin'ny famakiana voalohany)
B. Heveriko fa manampy ny zaza ao amin'ny Hyder ny zava-misy ao amin'ny famolavolana ny Gemara. Raha manontany azy ny mpiara-mianatra aminy hoe inona marina ilay zavatra nipoitra avy any amin'ny toerana tsy misy azy dia manomboka voafandrika sy menatra izy.
fahatelo. Raha milaza amiko ny vadiko fa nahita totozy potipotika teny an-dalana izy, raha tsy nisy fahapotehan'ny fitaratra mazava tsara, dia tsy hahatonga ahy ho mangoraka izany. Raha lazaiko azy - mandoa izy. Ny olona sasany dia misarika ho an'ny tenany ny zava-misy novakiany ary avy eo dia miaina izany amin'ny fomba iray ary ny sasany tsy manao izany. Afaka mamaky ny Harry Potter ary avy eo mijery ilay sarimihetsika ary miteny hoe - Tena tsy noheveriko ho toy izany! Ary nisy olona hafa tsy nieritreritra ahy fotsiny. Mino aho fa ny foto-pampianarana ao amin'ny Bar Ilan dia mahazo ny fijery roa, saingy tsy afaka ny tsy haka sary an-tsaina ny toe-javatra ho an'ny tenany.
D. Raha ny hevitro manokana dia heveriko fa raha sendra ny zava-misy ianarany ny olona iray dia ho sarotra kokoa ho azy ny hisaraka. Holokoiny ho azy avy hatrany ny toe-javatra iainany. Antony iray hafa mahatonga ny ankizy iray any Hyderabad ho mora kokoa ny mianatra momba ny fandehanana amin'ny lalana tsy mety sy ny sisa. Tsy an'ny tontolony loatra izany.
Andriamanitra. Azo atao ihany koa fa ny faniriana hanavao, izay misy amin'ny mpianatra sasany, sy ny tetikasa avy amin'ny tontolon'izy ireo mankany amin'ny tontolon'ny Talmudic fa tsy tonga amin'ny maha-receiver azy, dia mahatonga ny fianarana ho lasa fihetseham-po.
ary. Tsy isalasalana fa manampy amin'ny fahatakarana mazava tsara ny olana ny fahatapahan'ny fihetseham-po. Mety mbola ho very zavatra ianao raha tsy ampifandraisinao amin'izany ny fihetseham-po any aoriana. Ny fitondran-tena tsy maintsy ampifandraiko tokoa mba hahatakarana ilay olana, mety misy toerana ihany koa ny fihetseham-po.
(Tsy azoko hoe inona no olana amin'ny fantson-dra. Aza mamindra ra amin'ny alalan'ny fantsona mankany amin'ny marary? Tsy azo atao ve ny mamindra ra amin'ny fomba sterile eo anelanelan'ny paroasy amin'ny alàlan'ny fantsona? Na mamindra ra avy amin'ny biby novonoina ho any amin'ny fantsona ho zezika? ho an'ny maloto?Tokony ampiana ilay vampira hamindra ny rà avy amin'ilay toerana namonoany olona ho any an-dakozia misy sodina, ahoana no hanaovanao azy, sns... Fa fanontaniana tsy manan-tsiny izany.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 amin'ny 21:XNUMX
A. Angamba tsy azonao ilay izy. Fa tsy miaraka amiko. Mijoro daholo ny mpitsikera eo amin'ny toerany na inona na inona resaka vazivazy.
B. Eny tokoa, toy ny manontany an'i R. Chaim ny atao hoe vilany.
fahatelo. tsara izany. Tsy manana olana aho amin'ireo izay maneho toe-javatra ao an-tsainy, ary amin'ireo izay taitra amin'izany. Tsy heveriko fotsiny fa io fahatafintohinana io dia manondro hatsaran-toetra ara-panahy-moraly, na koa hoe tsy misy kilema.
D. Jereo ny c. Mety misy ifandraisany amin'ny fanamarihako amin'ny faran'ny tsanganana momba ny lesoka amin'ny fianarana mihitsy izany.
Andriamanitra. Ho an'ny fahasalamana. Misy fitakiana ve eto? Tsy miresaka momba ny diagnosy ny vehivavy na ny mpianatra aho, fa ny tena zava-dehibe. Tsy hoe avy aiza fa na zava-dehibe sy tena ilaina.
ary. Nohazavaiko hoe taiza izy.
Tsy azoko hoe inona no olana amin'ny fanontaniana momba ny vampira. Tsy hitako izay olana amin'izany.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 amin'ny 10:XNUMX
Raha ny marina, ny Gemara dia nosoratana tamin'ny haikanto fanafohezana mahery vaika. (Ity no iray amin'ireo mahagaga any, amiko, ilay mpamaky gaga).
Worlds-worlds dia azo aforitra amin'ny fehezanteny telo, ny fehintsoratra iray dia mety misy elanelana an-jatony taona, ahoana ny maha-zava-dehibe ny fampitahana amin'ny PSD an'ny Faratampony? Ny ao anatin'ny fehezan-teny fohy sy maranitra iray ao amin'ny Gemara dia ho niraraka tany am-polony, raha tsy pejy an-jatony.
Tsy miahiahy aho fa ireo mpanao asa tanana amin'ny teny farany amin'ny pejin'ny Talmudic izay tsy dia saro-pady noho ny vehivavy rehetra ary tsy misy mpitsara faratampony.
Ary tsy maintsy tsaroantsika fa ny zava-drehetra dia nanomboka tamin'ny lasa, ary avy eo ny tsy fahampian'ny fitaovana fanoratana, ilaina ny mandika sy mitahiry ho an'ny taranaka.
Mety hanome ohatra? Inona ary ahoana no hametrahanao an'i Sugia Danan?
Talata Nissan 10 - 04/2022/15 amin'ny 39:XNUMX
Miombon-kevitra aminao, ary tsy tonga saina ny hanoratra indray ny Gemara. Ny fampitahana amin’ny didim-pitsarana amin’izao andro izao dia mifandraika amin’ny didim-pitsarana ankehitriny. Ary angamba ny fomba ampianaran’ny raby ny mpianany. Heveriko fa raha raby ampianariny io dia hampianatra ny mpianany io olana io izy, fa hisy fihetsika an'ohatra kely. Wink, lazao sy ny toy izany. Tsy misy dikany ara-moraly mihitsy ny tantaran'ny fahafatesan'ny avalanche, loza mety hitranga na dia amin'izao fotoana izao aza any Ukraine, manana fanamarihana mahaliana ianao, momba ny am-bava. Manoro hevitra ve ianao fa misy fihetsika sasany tsy voatahiry ao amin'ny fandikana fohifohy ny fanoratana ho an'ny aoriana? Tsy fantatro ary tsy mieritreritra aho fa misy fomba ahafantarana. Angamba mendrika ny hanohitra ny mahay eto raha toa ka misy toe-tsaina 'emotional' kely kokoa amin'ny zavatra iray any amin'ny Shas. Ohatra, eto amin'ny pejy ankehitriny dia misy ilay fehezanteny mahafinaritra izay miseho imbetsaka - moa ve isika miatrika ny ratsy fanahy? Fanambarana tsy misy dikany tanteraka izany, saingy manana feon-kira mampikorontan-tsaina.
Fotoan'ny Torah sy fotoam-bavaka (ho an'i Saraha sy ny biby fiompiny)
Talata Nissan 10 - 04/2022/16 amin'ny 03:XNUMX
Ho azy sy Sarah - miarahaba,
Ny Tannaima sy ny Amorima izay nanana an'i Halaka - dia nanana angano sy nanoratra vavaka koa. Ao amin'ny teniny ao amin'ny Halacha - aoka ho azo antoka ny hamolavola ny raharaha. Raha ny tontolon'izy ireo ara-pihetseham-po - nambara tamin'ny teniny tao amin'ny angano sy ny vavaka naoriny (vavaky ny tena mahafinaritra sasany milaza an'i Tannaim sy Amoraim 'Batar Tzlotya' dia nivory tao Tractate Brachot, ary maro tamin'izy ireo no nampidirina tao amin'ny Siddur). Misaraka ny fotoanan'ny Torah ary misaraka ny fotoam-bavaka.
Miarahaba, Hillel Feiner-Gloskinus
Ary tsy toy ny fironan'ny manam-pahaizana momba ny Torah maoderina hampifangaro ny fianarana amin'ny fihetseham-po, izay hilazana hoe: 'Izay mampianatra ny zanany vavy Torah - dia mampianatra vavaka 🙂
'Ary miverena any amin'ny fonao' - mampiditra ny votoatin'ny fianarana ao am-ponao
Faharoa ambin'ny folo amin'ny Nissan 12 - 04/2022/16 amin'ny 51:XNUMX
Na dia tokony ho 'atidoha mifehy ny fo' aza ilay fianarana. Ny fianarana ny Torah dia mitaky ny fihainoana ny Torah izay tsy mifanandrify foana amin'ny fironan'ny fo - na izany aza, aorian'ny fanazavana ara-tsaina - dia tsy maintsy mamindra zavatra ao amin'ny fo isika amin'ny faniriana hamorona famantarana manokana amin'ny mpianatra.
Jereo ny lahatsoratr’i Rebbetzin Or Makhlouf (Ramit ao Midreshet Migdal-Anaz), ao amin’ilay rakitra “Satria biby izy ireo”, Migdal Iz Tisha: 31, p. 0. Ao izy dia mitanisa, ankoatry ny zavatra hafa, ny fanaintainan'i Grid Soloveitchikf, ireo tanora ultra-Orthodox izay nahomby teo amin'ny sehatry ny ezaka ara-tsaina… nahazo fahalalana momba ny hevitra sy ny didim-pitsarana. Mankafy lesona mahafinaritra izy ary miditra amin'ny olana sarotra. Saingy mbola tsy mandray anjara amin'ity hetsika ity ny fo… Tsy lasa zava-misy ara-tsaina ho azy i Halacha. Tsy hita ny tena fifankazarana amin'i Sechina… '209 Words of View, p. XNUMX). Jereo ny lahatsoratra lava
Aoka ho fantatra fa ny Torah dia mitaky ny fampandehanana ny fo mialoha sy aorian’izany. Talohan'izany - ny faniriana hifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendreny sy ny faniriany ao amin'ny Torah sy ny vavaka mba hanan-jo hitarika antsika amin'ny fahamarinana; Arahin’ny vavaka izay hahazoantsika tombontsoa hampihatra eo amin’ny fiainana ireo soatoavina nianarantsika.
Faharoa ambin'ny folo amin'ny Nissan 12 - 04/2022/16 amin'ny 56:XNUMX
Fehintsoratra faha-1, andalana faha-4
Famantarana manokana miaraka amin'ny mpianatra…
'Sabatra eo anelanelan'ny feny sy afobe misokatra eo ambaniny' dia mila fanapahan-kevitra voahevitra sy milamina.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 amin'ny 57:XNUMX
Ao amin'ny SD XNUMX ao amin'ny Nissan P.B.
Ny mpanelanelana amin'ny fanapahan-keviny dia tsy maintsy mihetsika ao anatin'ny tafio-drivotry ny fihetseham-po roa tonta. Loza ho azy amin’ny lafiny iray ary lozan’ny fanahiny raha diso izy ka nandao ny vadin’olona, ​​ary an-daniny kosa lozan’ny tenany ary lozan’ny tenany raha mametaka vehivavy azo avela. Ohabolana manapaka ho an'ny olona mandeha amin'ny lalana ety amin'ny sisin'ny lavaka tsy hita noanoa, mba hampidirana azy any amin'ny lavaka tsy hita noanoa na kely aza, na mivily miankavanana na miankavia.
Ary ny mpanelanelana dia tsy maintsy ao anatin'ny fanahiana avo roa heny, satria ny tsy firaharahiana dia hitarika azy ho amin'ny fanapahan-kevitra tsy marina noho ny tsy firaharahiana, ary ny mpanelanelana matahotra an'Andriamanitra dia tsy maintsy miahy, miahy fa tsy hahomby izy ary mamela ny voarara, ary mitandrina izay tsy handrara. ny azo atao. Ny fanahiany sy ny fanahiany ny hamoahana ny rariny - no anton'ny fikatsahany tsy mety sasatra ny fahamarinana marina.
Saingy ny fikorontanan'ny fihetseham-po izay nanakana azy tsy hanazava ny halakhah - izany mihitsy no mitaky ny hanazavana ny tenany amin'ny fomba fisainana sy tony, satria ny fanazavana noho ny tebiteby sy ny fahaverezan-tsaina - dia tsy afaka nanafotra ny marina. Noho izany, tokony ho tony ny mpanatrika mandritra ny fanadihadiana, ary ho vonona handinika ny safidy rehetra, eny fa na dia ny tena maharary indrindra aza. Noho izany, rehefa tonga ny fanontaniana - dia tsy maintsy mametraka ny tafio-drivotry ny fihetseham-po ny mpanelanelana sy mieritreritra amim-pahatoniana.
Amin'izany ny lehilahy halakhah dia toy ny mpiady voatifitra, izay tsy tokony hihetsika avy hatrany. Tsy maintsy mijanona kely izy, mialokaloka, mijery ny toerana tifitra azy, ary avy eo dia mitifitra tsara amin'ny tanjona. Ny fahadisoana amin'ny famelezana ny fahavalo dia mampidi-doza ho an'ny mpitifitra, satria mamadika ny fahavalo ny toerana fialofany.
Ary toy izany koa ny toe-javatra misy ny mpamonjy voina izay tonga amin'ny trangan-javatra mampihoron-koditra, marefo ary maro ny loza, izay tsy maintsy mamaky haingana ny toe-javatra, ary mametraka laharam-pahamehana. Alefaso avy hatrany izay mampidi-doza avy hatrany, valio haingana izay maika, ary avelao amin'ny dingana farany izay tsy dia maika. Tombanana fepetra fanaraha-maso - no fototry ny fitsaboana sahaza.
Ny faniriana mafy handresy amin'ny ady na hamonjy ny namoy ny ainy - no lasantsy nanosika ny mpiady na ny mpitantana hirotsaka an-tsitrapo ho an'ny vondrona miady na hery mpamonjy voina, fa ny fanapahan-kevitra ny amin'izay sy ny fomba atao amin'ny toe-javatra 'tsy mety' - dia tsy maintsy atao. miaraka amin'ny fitsarana kajy sy tony.
Mazava ho azy fa saika tsy azo atao ny mieritreritra amim-pahatoniana rehefa tojo kisendrasendra tsy ampoizina, fa noho ny adin-tsaina dia manadino ny 'théorie' iray manontolo. Ho an'izany, ireo mpahay lalàna halakhic, mpiady ary mpamonjy voina dia manao 'taranjam-piofanana' izay miezaka mialoha ny 'Batalam' rehetra, mba hamolavola mialoha ny fomba fiasa ho an'ny toe-javatra mitovy amin'izany, ary ny mpitsabo dia tsy mihetsika amin'ny toe-javatra rehetra. Dia rehefa tonga ny 'malfunction' dia mipoitra avy hatrany ny plan de action ary afaka manao zavatra milamina ianao fa tsy mila mifosa intsony. Nosainina sy novolavolaina mialoha ny drafitra.
Ny raharaha Tractate Yavmot. Ny loza vokatry ny horohoron-tany sy ny firodanan'ny trano, ny aretina sy ny areti-mifindra, ny fanjavonan'ny olona amin'ny diany ara-barotra sy ny sambo milentika any an-dranomasina, ny ady sy ny lisitra ary ny teti-dratsy - dia toe-javatra mety hitranga eto amin'izao tontolo izao izay niainan'ny olon-kendry, indrindra tamin'ny andron'ny fikomiana romana, ny Holocaust sy ny fikomiana Bar-Kochba.
Ny boky torolalana ho an'ny fitsaboana mahomby amin'ny toe-javatra mampiady saina dia tsy maintsy misy ifandraisany sy fohy, ary mirakitra mazava sy mazava tsara ny prototypes amin'ny toe-javatra mety hitranga ary manolotra azy ireo fomba fitsaboana, noho izany ny saron-tava Yavmot dia amboarina amin'ny fomba fohy sy maina, toy ny a hamboarina ny boky momba ny teoria ady na vonjy maika.
Miarahaba, Hillel Feiner Gloskinus
Ao amin'ny Mishnah sy ny Talmoda, ny teny hoe 'telegrafy' dia milaza azy ireo am-bava. Mba hahafahan'izy ireo manao tsianjery dia tsy maintsy atao amin'ny fomba maivana sy mahasarika. Tsy mahasoa ny fitadidiana ny resadresaka lalina na ny fipoahana ara-tsaina maharitra. Ny Talmud dia natao ho an'ny fandalinana lalina, ary ny vavaka dia natao ho an'ny firotsahan'ny fanahy. Ny 'sub' dia tokony ho fohy sy fohy
'Nantsoin'i Willen hoe Jacob tamin'io alina io' - tafio-drivotry ny fihetseham-po izay mitaky hetsika milamina
T. Benisan 10 - 04/2022/15 amin'ny 15:XNUMX
Ary noho izany i Yaakov Avinu, izay mivavaka amin'ny fanahiana sy ny fanahiana manao hoe: 'Mba vonjeo aho, faingana, ry rahalahiko, ataovy faingana... fandrao ho avy izy ka hamboatra reny ho an'ny zanany' - dia nanohy ny fihetsika tony. Tsy manomboka mandositra avy hatrany izy. Mifanohitra amin'izany, dia matory izy sy ny tobiny (ary iza no afaka matory amin'izao toe-javatra mahatsiravina izao?) Ary mifohaza mba hiady amin'ny tafik'i Esao. \_\_
Ary na dia Davida aza nandositra an'i Absaloma zanany, raha nitaraina mafy izy ka nitaraina sy nivavaka mba hamonjeny azy ho afaka amin'ny maro izay efa nitsangana hanohitra azy, dia ny vahoaka rehetra hanohitra ny olona mahatoky eran-tànan-ila izay mbola teo aminy. Asehony ao amin’ny vavaka ny fanahiany rehetra, ary ny vavaka ataony dia manome azy hery mba hanao zavatra amim-pahamarinana. Miezaka ny fomba fanelanelanana izy amin’ny alalan’ny fandefasana ireo saina tranainy hanitsakitsaka ny torohevitr’i Ahitofela, ary aorian’ny vavaka sy ny fifonana dia matoky izany izy, ary amin’ny toe-javatra maharikoriko maharikoriko dia afaka ‘hiara-pandry aho ka hatory, satria ianao no ho faty. ny Tompo irery ihany no mitoetra tokoa.
Hita ao amin’ny vavaka ny fanahiana, ary avy amin’izany no taizaina amim-pahatokiana ny olona mba hanao zavatra amim-pahendrena.
Misaotra, Ny PG
Talata Nissan 10 - 04/2022/16 amin'ny 59:XNUMX
Ekeo daholo izay lazainao.
Ary na dia ao anatin'ny halakhah aza dia imbetsaka ny fihetseham-po no voatahiry. Ary mazava ho azy fa ny fitambaran'ny angano sy halakhah dia mamela izany amin'ny lafiny sasany,
Tahaka ny, ohatra (ny fiainany) izay manohina ny fo, araka ny tsiroko: (Manontany tena aho raha misy mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony namela ny tenany handatsaka be loatra)
Talata Nissan 10 - 04/2022/17 amin'ny 14:XNUMX
azo antoka. Nanonona izany izy ireo.
Talata Nissan 10 - 04/2022/17 amin'ny 45:XNUMX
Teneno hoe eny, saingy tsy azony antoka fa ho nanao fitakiana toy izany izy ireo.
Raha ny tokony ho izy, dia ho hitanao ny halavan'ny fanapahana sy ny mandreraka, nandritra ny taona maro, rehefa lasa maivana ny tanana eo amin'ny klavier, ary misy ny loharano rehetra, ary tsy ilaina intsony ny mandidy ny mpanao gazety.
'Mampianatra fa tsy natory' - na dia eo aza ny hafanam-po
Faharoa ambin'ny folo amin'ny Nissan 13 - 04/2022/00 amin'ny 04:XNUMX
BSD XNUMX amin'ny Nissan PB
Momba ny maha-zava-dehibe ny fitazonana fahatoniana eo am-panaovana izany, Hasidim dia nanazava ny lahatsoratry ny olon-kendry 'Eny, nanao izany i Arona - nampianatra fa tsy natory izy', fa tsy takatry ny saina hoe inona ny 'Salka Da'ata' izay matorian'i Arona masina avy amin'Andriamanitra. didy? Ary nanazava ny mpanara-dia fa na dia feno hafanam-po aza i Arona rehefa nandeha nandrehitra ny jiro ary misy toerana hahatsapana fa noho ny hafanam-po dia ho diso hevitra izy amin'ny antsipiriany. KML izay na dia nahantona aza i Arona dia mitandrina tsara amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny fomba marina.
Talata Nissan 10 - 04/2022/17 amin'ny 22:XNUMX
Raha ny momba ny fitakiana fitaovana (izay tsy ekeko ihany koa), ao amin'ilay lohahevitra nosokafanao tao amin'ny IDF, angamba ny vahoakan'i Sura dia fanoharana faran'izay henjana amin'ity fitakiana ity amin'ny tranga tsy azo eritreretina. https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
Talata Nissan 10 - 04/2022/19 amin'ny 06:XNUMX
Eny tokoa, ao amin'ny Rami Bar dia zava-doza sy hatsikana amin'ny toerana iray ny fanononana zavatra. Fa eo no azo lazaina fa satria efa nisy ny zavatra natao, dia nangataka taminy ny amin'ny asany izy ireo. Ary toa tsy te hiantehitra amin'ny latabatry ny hafa izy
Talata Nissan 10 - 04/2022/22 amin'ny 20:XNUMX
Misy toerana ho an'ny "fihetseham-po manjaka" araka ny filazan'ny Gemara rehefa tonga ny ankolafy roa miady eo anoloan'ny Dayanim ary tsy misy fanapahan-kevitra mazava, ilay antsoina hoe "Shuda Dadayin".
Talata Nissan 11 - 04/2022/00 amin'ny 07:XNUMX
Shuda Dadaini dia didim-pitsarana amin'ny tranga manokana fa tsy amin'ny toe-javatra rehetra tsy misy fanapahan-kevitra. Noho izany dia misy ny lalàna momba ny fahafenoana. Saingy na i Shuda aza dia tsy fihetseham-po fa intuition. Aza miady.
Talata Nissan 10 - 04/2022/23 amin'ny 16:XNUMX
Raha ny fahitako azy dia zava-misy izany: nisy olona nanomboka dinika an-tserasera momba ny fanontaniana hoe "Raha fantatrao rahampitso fa marina ny Kristianisma - hanova ny fomba fiainanao amin'izany ve ianao". Ny sasany tamin’ireo valin-teny adaladala dia hoe “tsy ho tanteraka izany ka tsy misy dikany ny manontany”. Tena sarotra ny mahazo ny ampahany amin'ny fanontaniana hypothetical ny olona. Niezaka nanazava tamin’izy ireo aho fa mety tsy ho voatery hanipy olona matavy be eny amin’ny lalamby mihitsy koa izy ireo mba hisakanana ny fiaran-dalamby tsy hihoatra ny olona an-terisetra dimy, kanefa izany dia fanontaniana fototra amin’ny taranja filozofia momba ny fitondran-tena; Saingy tsy nahomby…
Avy eo dia nisy olona niady hevitra tamiko fa amin'ny ankapobeny dia tsara ny fanontaniana hypothetical, saingy misy zavatra manafintohina ara-pihetseham-po loatra ka noho izany dia tsy mety ny miresaka azy ireo amin'ny hypothesis (mifanohitra amin'ny hoe, ny fanitsakitsahana olona matavy be amin'ny lamasinina izay mety tsy taitra mihitsy). R.M. tao amin'ny yeshiva lycée ny mpanoratra, ary tena tsy mazava amiko ny zavatra ataony amin'ny olana tahaka ilay voalazanareo teto… Na izany na tsy izany, taorian'ny adihevitra fohy dia nanontany ahy izy raha heveriko fa ara-dalàna ny manontany ahy " inona no hataonao raha fantatrao rahampitso mamono ny reninao" . Mazava ho azy fa tsy azoko hoe inona no olana amin'izany, ary lasa aho nilaza tamin'ny reniko, izay tsy azoko koa hoe inona no olana amin'ity fanontaniana ity ... inona koa raha ny adihevitra no nametrahany ilay fanontaniana, ka tsy azoko. tena azony tsara hoe inona no tiana hazavaina.
Fehiny - rehefa sarotra ho an'ny olona ny miatrika ny votoaty (ara-tsaina!) dia mihazakazaka mankany amin'ny sisiny izy ireo ary manandrana manondro 'olana' kosmetika ho fialan-tsiny hoe nahoana no tsy mety amin'ny voalohany ny fandraisana anjara amin'ity atiny ity (avy eo tantara tena tsara tarehy ihany no sisa ianarana).
Talata Nissan 11 - 04/2022/00 amin'ny 11:XNUMX
tokoa. Marihiko fotsiny fa misy toerana ho an'ny filazany momba ny kristianisma toy izao manaraka izao: angamba araka ny heviny raha nisy dikany ny kristianisma dia tsy kristianisma fantatsika izany. Noho izany dia tsy misy toerana ho an'ny fanontaniana hoe inona no ho nataoko raha hitako fa marina ny Kristianisma. Toy izany koa, tsy misy toerana ho an’ny fanontaniana ny amin’izay ho nolazain’i Maimonides momba ny toe-javatra rehetra amin’izao androntsika izao. Raha mbola velona izy ankehitriny dia tsy ho Maimonides.
Talata Nissan 10 - 04/2022/23 amin'ny 29:XNUMX
Salama Raby Michi.
Sarotra ny miady hevitra amin'ny fitakianao, raha ny "common sense" dia mazava fa ny madio sy marina indrindra dia ny miasa amin'ny net halakhic rational analysis. Saingy tsy azo odian-tsy hita ny zava-misy fa matetika ny olana Shas manam-pahaizana dia nofonosina amin'ny tantara izay manome azy ireo famakiana ny fitarihana ara-pihetseham-pon'olombelona na ara-moraly.
Hanome ohatra 2 aho ( somary malemy ny voalohany): Rehefa avy niresaka momba ny antsipirian'ny olana ara-pitsipi-pitenenana sy zava-misy isan-karazany i Tractate Gittin, dia nanao toriteny momba ny fankahalana sy ny fisaraham-panambadiana izy. Ary tena mampalahelo an'Andriamanitra ny fisaraham-panambadiana. Nahoana no zava-dehibe ho an'ny Gemara ny mamarana ny Tractate amin'izany fomba izany? Tsy eto va famakian-dalana?
Ao amin'ny Gemara ao Kiddushin dia misy angano tsara tarehy momba an'i Raby Asi sy ny reniny. Tena zava-dehibe tokoa izany ka nampiditra manontolo ny lalàn’i Miriama toko faha-XNUMX sy Maimonides. Ao amin'ny faran'ny olana dia voasoratra fa nilaza i Rabi Asi hoe "Tsy fantatro ny Nafaki" Ny ankamaroan'ny mpaneho hevitra dia nanazava io fehezanteny io tamin'ny solomaso halakhic. Nilaza i Raby Asi fa tsy handao ny tanin'ny Isiraely noho ny antony halakhika isan-karazany izy (ny fahalotoan'ny firenena satria mpisorona sy antony hafa). Nanoratra tao amin'ny Halacha i Maimonides fa raha voafitaka ny ray aman-dreniny dia afaka mampionona sy mandidy olon-kafa hikarakara azy ireo izy. Ny Money Mishnah dia nampahery an'i Maimonides ary nilaza fa na dia tsy voasoratra mazava momba ilay olana aza izy io dia azo inoana fa i Raby Asi taloha. Tezitra tamin’i Maimonides ny Raby ary nilaza fa tsy izany no fomba ahafahan’ny olona mamela ny ray aman-dreniny ho an’olon-kafa mba hikarakarana azy ireo. (Azo lazaina fa fiheverana halakhic izany fa midika fotsiny hoe tsy mahazaka ny hevitra momba ny fitondran-tena izy) Tsy misy olana = Tsy handao an'i Babylona aho. Ary ilazana ny fanafihan’ny Rab’ad an’i Maimonides.
Ny marina dia hita fa raha ny marina dia ny rariny halakhic miaraka amin'i Maimonides sy ny resaka vola nefa ny masonay dia mahita fa nisy manam-pahaizana sy mpitsara iray namaky io angano io raha ny marina tamin'ny famakiana tantaram-pitiavana ara-moraly.
Tombaniko fa raha nanana boky nosoratan'ny mpianatry ny olon-kendry iray aho, Rabbi Yehuda Brandes, "A Legend in Actually", dia ho nanome ohatra vitsivitsy aho ary mety hahomby kokoa.
PS: Miandry sy miandry tsanganana momba ny resabe momba ny fiovam-po (hafiriana no azonao toherina?)
Talata Nissan 11 - 04/2022/00 amin'ny 13:XNUMX
Tena misy ohatra vitsivitsy. Jereo ohatra ao amin'ny tsanganana 214 eo amin'ny lavenonany noho ny zana-tsipìkany. Tsy izay anefa no resahiko eto. Te hampianatra ahy izy ireo fa zava-dratsy ny fisaraham-panambadiana. Inona no ifandraisan'izany amin'ny fanapahana halakhah amin'ireo raharaha ireo? Misy ifandraisany amin'ny fitarihana ankapobeny manohitra ny halakhah ny tokony hatao mba hisorohana ny fisaraham-panambadiana.
Talata Nissan 11 - 04/2022/09 amin'ny 36:XNUMX
“Tokony hieritreritra mangingina momba ny raharaha atrehany ny mpitsara. Ny zavatra lazain'ny halakhah dia tsy misy ifandraisany amin'izay lazain'ny fihetseham-po (ary raha ny hevitro dia tsy izay lazain'ny moraly akory), ary tsara izany. Ny mpitsara dia tokony hanapaka ny lalàna amin'ny fahatoniana mitokana, ary noho izany dia manan-jo hitantana ny fahamarinan'ny Torah. « Hatreto ny teninao.
Nomeko ohatra avy amin'ny tantaran'i Raby Asi sy ny reniny izay voaheloka ho an'i Halacha. Niafara tamin'ny filazana aho fa ny Raby sy ny Rashash dia tsy mitovy hevitra amin'izy ireo amin'ny fomba halakh, amin'ny lafiny maha-olona na ara-moraly.
Talata Nissan 11 - 04/2022/10 amin'ny 03:XNUMX
Ny teny ampahana ratsy kokoa dia feno holazaina mihitsy. Rehefa dinihina tokoa, nanoratra aho fa misy toerana hampidirana ny fiheverana toy izany ao amin'ny dingana B, rehefa vita ny fifanakalozan-kevitra momba ny safidy halakhic fototra. Raha tsy tapaka ny lalàna fa mbola misy safidy maromaro, ny fomba hanapahan-kevitra eo amin'izy ireo dia mety ahitana ny fitondran-tena (ary angamba ny fihetseham-po ho famantarana).
11 amin'ny Nissan 04 - 2022/19/59 amin'ny XNUMX:XNUMX
1. Angamba izany no iray amin'ireo antony tsy maha-vehivavy ny Gemara ka tsy mahafeno fepetra tsy hiresaka momba izany izy ireo? (Ny fanontaniana dia tsy mamaritra)
2. Ny marina dia taona maro aho namaky ny “Baiboly Roa sy Dikanteny Iray” dia nahita tantara avy ao amin’ny Torah izay tsy nisy fihetseham-po ho ahy sy ho an’ny taranaka vavy (toa mazava ho azy) tsy nizara ny manodidina ahy mihitsy aho satria Tsy manana teny hampitaina ny fihetseham-poko aho indrindra fa variana amin'ny fihetseham-po izahay, izao aho dia tsy tadidiko ohatra maro afa-tsy ny iray tamin'i Eliezera tonga nifampiraharaha haka an'i Rebecca (tamin'ny fotoana tsy mbola lasa fianakaviana iray ny tany Mety ho fisarahana eran-tany amin'ny fianakaviany izay manampy ny fihetseham-po eto) ary i Betoela rainy sy i Ben anadahiny dia niezaka nanemotra ary avy eo Ilay zazavavy (tsy hadinoina fa telo taona izy dia teboka iray hafa izay mitondra fihetseham-po ho an'ny lalao manontolo) Manontany ny olon-kendry ary aiza ny rainy ao amin'ny tempoly? Namaly ny olon-kendry fa maty izy (nihinana ny vilia misy poizina nomanina ho an’i Eliezera tamin’ny alalan’ny anjely iray izay nasolo ny takelaka toy ny hoe fampahatsiahivana ny hyder aho) ary avy hatrany dia voalaza fa nanontany sy nandefa an’i Rebeka handeha izy, ary eto ny zanany. Manontany an-tsaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny loza toa an'i Dom Eliezer, fara fahakeliny, amin'izao fotoana izao, ary hahatsapa ho menatra kely amin'ny kilasy iray manontolo sy ao an-trano amin'izao fotoana izao manoloana ny lozam-pianakaviana (mety hiezaka ny hamoritra fitaovana mangina ary miala amin'ny toerana rehefa tonga amin'ny fotoan-tsarotra toy izany izy na koa noho ny tsy fahazoana aina Ny tanjona dia ny ho avy sy hanampy amin'ny vatany sy ny fanahiny rehetra amin'ny fikarakarana ny fandevenana sy ny fananganana tranolay ary ny fitondrana seza ho an'ny mpisaona sns sns) fa amin'ny fampiharana amin'ny Torah izao tontolo izao toy ny mahazatra dia mitohy afa-tsy ny drafitra mitohy araka ny nomaniny ho solon'izay.Ny momba an’i Josefa sy ny rahalahiny, eny, tompokolahy, dia izao no toe-javatra (tsy nandalo io fahatairana nataon’i Esao io araka ny filazan’ny olon-kendry fa i Mordekay Jiosy no nandoa izany, an’arivony taona maro tatỳ aoriana, araka ny fantatra). Ankoatra ny bokotra amin'ny akanjony, indray mandeha, rehefa nisy mpitsara nanandrana nandrisika ny iray hisaraka tamin'ny vadiny tamin'ny filazana taminy fa voasoratra fa ny alitara dia mandrotsaka ranomaso, dia namaly azy ireo izy ary tsy ratsy mandraka androany. izao koa, Ny amin'ny raim-pianakaviana iray izay nahita mialoha tao amin'ny tempoly nanindrona antsy ny zanany ary teo ilay raim-pianakaviana dia tonga saina tamin'ny fitsipi-pitenenana, dia nandidy ny hamoaka ny zanany teo am-pivoahana noho ny tahotra ny fahalotoana (fa tsy ny kapoka) ary ny Gemara miresaka ao io raim-pianakaviana io, na manana fanajana tafahoatra na "autiste" momba ny vono olona
3. Eo amin'ny tontolon'ny fanamarihan'ny raby hoe "tahaka ny manontany an'i R. Chaim hoe inona no atao hoe pan" dia tsy nahomby ny ohatry ny raby ary hasehoko an-tsary izany amin'ny tantara iray. Angamba ho an'ny fanomezana sy ny fahafolonkarena dia nanontany azy i R. Chaim hoe inona no atao hoe zavokà. ? Nihetsi-po i R. Abraham ka niteny hoe azonao ve ny dikan'ny hoe be? Ao amin'ny Babyloniana sy Jerosalema rehetra sy ny Midrashima sy ny Tosefot ary ny Zohara, sns., dia tsy misy ny teny hoe avocado.
Efa voatonona imbetsaka ao amin'ny Torah i Masach Pan eto mba hisaorana ny raby noho ny "article tsy nosoratan'ny raby" taorian'ny nahafatesan'ny rabyntsika tamin'ny fitandremana ny didim-pitsarana tahaka ny nandidiana azy hilaza zavatra heno. ary farihy iray izay tian'ny raby mamono omby masina na aiza na aiza amin'izao fotoana izao amin'ny telopolo taonany rehefa mafana dia mora kokoa amin'ny fipoahan'ny dome ny Tendrombohitra Tempoly noho ny famonoana omby masina, dia nanontany ny rabyntsika aho tamin'ny faritra iray nahay. fanendrikendrehana raha navela hilaza ny tena fiderana aho (ary ampiako hoe fiderana lehibe ho ahy izany) fa ny vavan'ny mpihaino dia mihevitra fa manambany io tantara io ary nitondra ohatra momba an'i R. Chaim aho (amin'ny fomba R. Chaim). mivavaha intelo isan'andro mba tsy hahatsiaro na inona na inona afa-tsy ity Torah ity porofo hafa manohitra an'i Rabbi Shefilot Assistants) ary toa namaly ahy ny raby fa voarara izany ary tao anatin'ny dingana dia nilaza tamiko aho fa amin'ny maha-mpianatra yeshiva azy any Amerika dia misy. Fifidianana filoham-pirenena Heveriko fa ho an'ny filoha iray antsoina hoe Johnson ary nanana minisitra yeshiva amin'io anarana io izy ireo ary ny lohan'ny yeshiva dia variana tamin'ny fianarana rehefa nilaza taminy.
11 amin'ny Nissan 04 - 2022/20/15 amin'ny XNUMX:XNUMX
R. Chaim an'ny vilany dia R. Chaim of Brisk
12 amin'ny Nissan 04 - 2022/01/06 amin'ny XNUMX:XNUMX
Avy aiza izany? Na izany na tsy izany, ny zava-dehibe dia samy miaiky isika fa tsy R. Chaim Welder
12 amin'ny Nissan 04 - 2022/02/15 amin'ny XNUMX:XNUMX
Voalaza fa nalain'i Rabbi Chaim avy any Brisk tamin'ny fitsapan-kevitra ny vilany sy vilany iray, midika izany fa tsy mila mahafantatra tsara ny fomba fanamboarana vilany iray sy ny salan'isa eo anelanelan'ny halavan'ny tahony sy ny savaivony. . Izany no nitranga fa tsy amin'ny fomba mahazatra ny zaza dia tsy mila mahatakatra hoe inona marina izany fa manao zavatra tsy araka ny fanaony ary misy lalàna isan-karazany, ary ny fahalalany halakhic dia tsy simba na inona na inona.
Amin'ny ankapobeny, R. Chaim fotsiny dia R. Chaim avy any Brisk (farafaharatsiny any amin'ireo toerana resahana ao amin'ny Gemara fa tsy Halacha), tahaka an'i Rashba ihany R. Shlomo ben Aderet fa tsy Rash Mashantz, na dia ny voninahitry ny samy tsara be.
Faharoa ambin'ny folo amin'ny Nissan 12 - 04/2022/17 amin'ny 50:XNUMX
Raby ve ianao no nanao ahy de jow noho ny tantara iray henoko tamin'ity toe-javatra ity:
Tsaroako fa tamin’ny lesona natrehiko dia nilaza taminay ny raby izay nampianatra ny lesona (lehilahy avokoa ny mpandray anjara) fa nampianatra lesona Gemara izy mba hanorenana seminera, ary tao amin’ny Tractate Yavmot izany.
Nolazainy taminay fa nataony teo amin’ny solaitrabe ny “fianakaviana” manontolo tamin’ilay olana ary nasiana Xs ny “maty” rehetra ary avy eo nitodika izy ka nahita fa raiki-tahotra ny endrik’ireo tovovavy.
Nangoraka ireo “maty” voaloko teo amin’ny solaitrabe izy ireo.
Tsy ilaina ny milaza fa samy nihomehy sy nitsiky izahay rehetra tamin'ny tantara.